Hentitra ny ”Prefet de police”, ny Jly Ravelonarivo Angelo : hosaziana ireo tsy manao arovava orona manomboka anio | NewsMada
Hentitra ny ”Prefet de police”, ny Jly Ravelonarivo Angelo : hosaziana ireo tsy manao arovava orona manomboka anio
Efa nanomboka miakatra indray ny tahan’ny olona mararin’ny valanaretina Covid-19, tato ho ato, eto amintsika. Nandray fanapahan-kevitra hentitra ny eo anivon’ny prefektiora, miaraka amin’ny Emmo/Reg fa horaisina ny fepetra, manoloana izany.
Nivory momba izany ny Organe mixte de conception (OMC), ahitana ny avy amin’ny mpitandro filaminana rehetra, ny faran’ny herinandro teo. “Hisy fepetra hiraisina eto amin’ny faritra Analamanga: haverina indray ny tsy maintsy itondran’ny olona arovava orona”, hoy ny préfet de Police, Antananarivo, ny jeneraly Ravelonarivo Angelo.
Haverina avokoa ihany koa ireo fepetra sakana rehetra amin’ny taxi-be sy ny taksiborosy hisorohana ny mety hahazoana sy tsy hiparitahan’ny valanaretina Covid-19. Haverina ihany koa ny fanasaziana ho an’ireo tsy manao arovava orona, manomboka anio. Fanapahana teo anivon’ny préfet de Police no noraisina ny amin’izany. Tsy maintsy atao ny mitondra arovava orona amin’ny banky, ny tranom-panjakana…
Sakana amin’ny fidirana an’Analamanga
“Mety hisy koa ny sakana ara-pahasalamana amin’ny fidirana an’Antananarivo, indrindra amin’ny lalam-pirenena RN 7″, hoy izy. Nentaniny ihany koa ny amin’ny tsy maintsy hanajana ny fepetra sakana rehetra tsy hiparitahan’ny valanaretina Covid-19, indrindra amin’ny fiatrehana ny Krismasy sy ny fetin’ny faran’ny taona. Eo ny fitondrana arovava orona, fanasan-tanana matetika amin’ny rano sy savony na amin’ny tsiranoka famonoana tsimokaretina, fanajana ny elanelana iray metatra, fandrarahana fanafody amin ’ny toerana ivezivezin’ny olona…
Mila mifampiteny ny rehetra
Iaraha-mahita amin’izao fa efa maro ireo tsy manao arovava orona eny an-dalambe, eny an-tsena… Anisan’ny nampirongatra tampoka indray ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 tato ho ato izany ? Mety eo koa ny fidiran’izany avy any ivelany hatramin’ny nisokafan’ny sisintanin’i Madagasikara. Na izany aza, mila mailo ny rehetra amin’ny fanajana ireo fepetra sakana hisorohana ny fiparitahan’ny aretina. Ao anatin’izany ny fifampitenenana, fifampahatsiahivana, fifampitandremana. Hiandry fanasaziana indray ve vao hahatsiaro tena fa mby an-koditra indray ny loza amin’izao?